အင်တာဗျူး နဲ့ အလုပ်အကိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » အင်တာဗျူး နဲ့ အလုပ်အကိုင်
အင်တာဗျူး နဲ့ အလုပ်အကိုင်
Posted by ဇီဇီ on Mar 1, 2013 in Jobs & Careers, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 45 comments
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပြီး ပေါ့။
ဒီရာသီက အလုပ်ပြောင်းအရွှေ့လုပ်ကြတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပြီ။ ဒီလို အလုပ်အပြောင်းအရွှေ့တွေက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေခဲ့ရတာ အတော်ကြာပြီရယ်။ ကိုယ့် ဘိုးတော်ကြီးကို ချစ်တာရယ်၊ အလုပ်မှာ ပျော်တာရယ်၊ အင်တာဗျူးတွေ မဖြေချင်တာရယ်၊အလုပ်သစ်တစ်ခုပြောင်းရင် ရမဲ့ ဖိစီးမှုတွေကို မယူချင်တာရယ် နဲ့ ဒီတစ်လုပ်ထဲမှာ အပျင်းကြီးနေတာ။ ကိုယ့်သဘောဖြစ်နေတဲ့ နေရာလေးက မရွှေ့ချင်တာလည်း ပါတာပေါ့လေ။
မန်းလေးတုန်းကတော့ ဘာအလုပ်မှကို မလုပ်ဖူးတာ။ အလုပ်ဝင်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီး အင်တာဗျူးဖြေရမဲ့နေ့မှာ အဲ့ လမ်းထိပ်က စမူဆာသုပ် ဆိုင်မှာ ထိုင်ရင်း အင်တာဗျူးဖြေရမှာ ကြောက်လို့ သေချာပေါက်ဆိုတဲ့ အလုပ်ကြီးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ထပြန်လာတာ။ သတ္တိက အဲ့ဒီလို။
အလုပ်လက်မဲ့ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုပဲ မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ ယူပြီး နေဖူးတယ်။ အလုပ်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့အတိုင်း “အင်တာဗျူးဘယ်လိုဖြေပါ” တို့ “ဘယ်လိုဝတ်စားပါ” တို့ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတွေဆို ကျော်ဖတ်တာပဲရယ်။
စလုံးရောက်တော့ အင်တာဗျူးသွားရမယ်ဆိုတော့ ဒုက္ခနဲ့ လှလှကိုတွေ့ကြတာ။
ကြောက်တာမှ အတော့ကို စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ဗမာလို အင်တာဗျူးကိုတောင် ကြောက်လို့မဝင်တာ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ ပိုဆိုး။
ကံကောင်းတာ တစ်ခုက ကိုယ်က မင်သေတယ်လေ။ ကြောက်တာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားတာ မျက်နှာမပေါ်စေရပေါ့။ အားတင်းပြီး သွားဖို့ပြင်ရတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းတာဘယ်မှာ ပေါ်တုန်းဆို အင်မတန်ချစ်ခင်ပြီး ကိုယ်နဲ့ တတွဲတွဲထားတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းက အိမ်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ အိမ်ကလူတွေ စိတ်ပူပြီး သွေးတိုးတာပေါ့။ ဟိ။
အဲဒီနေ့က ဗျူးတဲ့ သူဌေးက မိန်းမ။
တယ်လီဖုန်း မပါ၊ နေရာ မကျွမ်းနဲ့ အချိန်နဲနဲ နောက်ကျပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဟိုမေး၊ ဒီမေး မေးပြီး ဘွားတော်က ကြိုက်တယ်တဲ့။ စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာမှ မမေး။ ကိုယ့်မှာ စာတွေ ကျက်သွားရတာ။
အလုပ်ဆင်းရမဲ့နေ့ ဖုန်းဆက်မယ်ပေါ့။ ခု Pass လျှောက်ဖို့ ကိုယ့် စာရွက်စာတမ်း မိတ္တူယူထားမယ်ပေါ့။
ကြိုက်တယ်အပြောခံရတော့ ပျော်ရွှင်ပြီး (အိမ်က သင်ပေးလိုက်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်းရတဲ့ အခွင့်အရေး ဆိုတာတွေ အကုန်မေ့) အကုန် အိုကေ ပြောပြီးပြန်လာတာ။
ည, မန်းလေးကို ဖုန်းဆက်လိုက်သေးတယ်။ အလုပ်ရပြီပေါ့။ လစာတွေ မြန်မာငွေနဲ့မြှောက်ပြီး ဟီလာတိုက်နေတာ။
အဲလိုနဲ့ စောင့်နေတာပေါ့။ ၂ ရက်မဆက်သွယ်၊ ၅ ရက် ဘာသံမှ မကြား၊ ၁ ပတ် ဖုန်းမကိုင်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ ပီအေမ ဆီ ဖုန်းဆက်တော့မှ အဲ့ နေရာ လူရသွားပြီတဲ့။
ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ အလှန်ခံလိုက်ရတာပါ။ ဝဋ် ပေါ့။
ကိုယ့်မတော့ အလုပ်ရပြီဆိုပြီး အဲ့ဒီ ၁၀ရက်က အင်တာဗျူးတွေကို ငြင်းထားတာရယ်။
အဲ့ဒီ သူဌေးမ အကွက်က နဲနဲ သဘောကျတဲ့သူ အကုန်လုံးကို အဲဒီလိုပုံပြောပြီးမှ နောက်ဆုံးသူအကြိုက်ဆုံးကို ရွေးသွားတာပေါ့လေ။
ကိုယ် တစ်ပတ်လောက် စိတ်နောက်သွားပါတယ်။ အချိန်ဖြုန်းလိုက်မိတာ နောင်တရသွားတာကိုး။
နောက် ဆက်လျှောက်တော့ နောက် အင်တာဗျူးတစ်ခုရပါတယ်။
သွားဖြေတော့ သူတို့နဲ့ ပြောနိုင်တာကို သဘောကျပါတယ်တဲ့။ တစ်ခုပဲမေးမယ်ဆိုပြီး DRAWING ယူလာပြီး BRICK WALL ကိုထောက်ပြပါဆိုပဲ။
အတော်လေး အော်ငိုချင်သွားတာပါ။ ဒါ ကိုယ့်ကို မယုံဘူးပေါ့။ ဘာလို့ပါလိမ့်ပေါ့။
မယုံတာနည်းတောင်နည်းသေး။ အဲဒီတုန်းက သီလရှင် လူထွက်ပြီးကာစ ဆံပင်က အတိုလေး။ လူက ခုလောက်မဝ၊ ပုပုသေးသေးပြောရမယ်။ ဘာစိတ်တွေပေါက်ပြီး ဝတ်သွားမှန်းမသိတဲ့ ဂါဝန် အတိုနဲ့။။
အမူအရာကလည်း ဟန်ကိုယ့်ဖို့လုပ်ထားရတော့ အိုဗာတွေဖြစ်နေမှာပေါ့။
အဲဒါ ပြီးမှ ပြန်တွေးမိတာပါ။
တဒင်္ဂ ရွဲ့တတ်တဲ့ စိတ်ရိုင်းက ဝင်လာတာနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။ မသိဘူး လို့။
ဘာဖြစ်တုန်း။ ဘာမှမဖြစ် အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွါလာရတာပေါ့။ အိမ်ရောက်တော့ အဆူခံရသေး။ :saut:
နောက်တော့ ပထမဆုံးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လာမဲ့ အင်တာဗျူးသွားရပါတယ်။ ဘိုးတော်က ရှန်ဟိုင်း တရုတ်ပါ။ သူ့စကားကို နားလည်အောင် နားထောင်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဘယ်သူ့စကားမဆို နားလည်နိုင်သွားပါတယ်။
ကမ်ပနီက သေးသေးလေးပါ။ ကိုယ်သွားတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာ တစ်ယောက်ခန့်ပြီးပြီတဲ့။ ကိုယ့်ကို အာဂတန် ပါဂတန် ဗျူးတယ်ထင်ပါရဲ့။
ဘာမှမမေးလို့။ စကားစပ်မိရင်း မြန်မာပြည်အကြောင်းတွေ သိသလောက် သူပြောကိုယ်ပြောနဲ့ ဘိုးတော်က အတော်သဘောကျတာတဲ့။
ကံကောင်းလို့ စာတွေ၊ အလုပ်တွေ အကြောင်းမေးလို့ကတော့ ဂွမ်း မှာ သေချာနေပြီ။
သူကပြောတယ် ၇ ရက် သူ့ဆီမှာ ရုံးတက်တဲ့။ အဲဒီ ၇ ရက် လစာပေးထားမယ်။ ၇ ရက် အတွင်းကြိုက်ရင် Pass လျှောက်ပေးပြီး ခန့်မယ်ပေါ့။ ကိုယ် အချိန်တစ်ပတ်ထပ်ဖြုန်းရဦးမဲ့ သဘောပေါ့လေ။
ရုန်းကန်ရချက်များ ဘဝက ဘယ်တော့မှ ဘာကိုမှ ရှောရှောရှုရှုပေးမစားပါဘူး။
ရပါတယ် ကိုယ် ပဲပေါ့။ ၇ ရက်လား များလွန်းတယ်ပေါ့။ (အဟမ်း။ ဟိုတစ်ယောက်တွေ့ရင် ကျုပ်ကို အိုစီ လို့ပြောဦးမယ်ရယ်။)
ဒါနဲ့ မည်သို့လုပ်လိုက်သည်မသိ။ ၃ ရက်အတွင်း ခန့်ဖို့ သေချာသွားတယ်ပေါ့။
အဲလို အလုပ်ရဖို့ကို ဘရုတ်သုတ်ခနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီမှာ ရှစ် လပဲ ကြာခဲ့တယ်။ ဘိုးတော်နဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး အလုပ်က ထွက်ရတယ်လေ။ သူက ကိုယ်နဲ့ အပြိုင် စွာ တာကိုး။ ကြာကြာ မတည့်။
နောက် မောင်လေးတွေ လာမယ်ဆိုတော့မှ အင်တာဗျူးဖြေနည်းတွေ၊ ဝတ်စားနည်းတွေ ဟိုရှာ၊ ဒီရှာနဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်းသိ၊ သူများလည်း ဆရာလုပ်နိုင်နဲ့ ခု အလုပ်ကို ကောင်းမွန်သင့်တော်သော
အခြေအနေ၊ အင်တာဗျူးနဲ့ ရထားတာပါ။
ခုဘိုးတော်က အင်တာဗျူးပြီးတော့ သူ့ HR ကိုပြောတာတဲ့။
ကိုယ်စကားပြောတာ၊ဆိုတာ မြန်မာမနဲ့မတူဘူးဆိုပဲ။ ဘာလို့တုန်းလို့ မေးတော့ မကြောက်တတ်၊ အားမနာတတ်လို့တဲ့။
အစစ်ပဲ။ နဲနဲ နပ်သွားချိန်ဆိုတော့ ရပိုင်ခွင့်တို့၊ အခွင့်အရေးတို့ကို အင်တာဗျူးမသွားခင် MOM Website မှာ အကုန်ဖတ်ပြီး အကုန်တောင်းတာလေ။
သူ့အလုပ်သဘောကိုလည်း အကုန်ပြန်ပြီး လျှောက်မေးတာ ကိုယ့်အင်တာဗျူးကနေ သူပြန်ဖြေရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားရော။
တောင်းတဲ့ လစာကိုလည်း များလို့တဲ့ စစ်လိုက်တာ ဈေးဝယ်သူကြီးကျလို့။
ကမ်ပနီ အခြေအနေနဲ့ ဒီလောက်တော့ပေးနိုင်မယ်ထင်လို့ပါလို့ မျက်နှာသေလေးနဲ့ ပြောတော့မှ ရီ ပြီး သဘောတူပါတယ်။ နောက်မှသိရတာ ကပ်စီးနဲတဲ့နေရာ ကိုယ့်မင်းသားကြီးက သူမတူပါ။
ဟယ်။ အဲ့တော့မှ အဲဒီလောက် ရဲတင်း ပေါက်စိန် လုပ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး ပြန်လျှော့ဖို့ စဉ်းစားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ အဲဒါကို သဘောကျသွားတာတဲ့။
သူနဲ့ ဒီ အလုပ်ခရီးကတော့ ဒီနှစ်ထဲဆို ၅ နှစ်တိုင်ပါပြီ။ သူ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ စာရိတ္တကို ကြိုက်လို့လည်း ဒီ လောက်မြဲတာပါ။
ဟီး။ အားနေလို့ ရေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးနေတာ။ အတော်များသွားပြီ။
အင်တာဗျူးနဲ့ ပတ်သက်တာ နောက်တစ်ပို့(စ) မှာ ရေးပါ့မယ်။ အစက တူတူရေးမလို့ဟာ။ ခု လေကြောအတော်ရှည်သွားပြီ။
အတူတူပဲဆွိရေ.. ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပိုင်ထားပိုင်ထား အင်တာဗျူးဆို အသေကြောက်တာ.. ရုပ်ကရုပ်တည်နဲ့ နေလို့ရသေးတယ် လက်ဖျားစမ်းကြည့် ရေခဲတုံး…
မယ်ဆွိ နာ့များစောင်းရေးထားသလားမသိဘူး အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးဆိုရင်လဲ နာနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်.. ထင်တာ စွတ်တောတာ.. လူသစ်ပေါင်းရမှာလဲ ကြောက်တော့ ဒီမှာပဲ တွယ်ကပ်နေနေတာ ကြာပေါ့အေ…
ဘိုးတော်က နဲနဲ သဘောကောင်း(အမှန်က ပေါတာ) လို့တော်သေးသပေါ့ :harr:
အမှန်က ကျောင်းတက်တာ သူ့ဆီက ခွါချင်လို့ပါ အေရယ်။
ဒါပေမဲ့ သူများ သူဌေးတွေ အကြောင်းကြားလိုက်တော့ ကိုယ့် မင်းသားကြီးသာ ကိုယ့်အပေါ် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါလားလို့ …
“နောက်ဆုံး မင်း ရဲ့ ရင်ခွင်ဆီ”..
ရမ်းရမ်း ကပ်စီးနဲတာလေးက လွဲရင် ကျန်တာ ရမ်းရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြန်ရော။
ရုံးမှာ ကြိုက်တာလုပ် ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်..
ငယ်ငယ်ကတည်းက သောက်ကြောပြောင်လာသူမို့ အလုပ်အင်တာဗျူးတော့ မကြောက်ပါပူး…
စကီလေးဒွေဗျူးတဲ့ ခြစ်အင်တာဗျူးပဲ ခုချိန်ထိ အသည်းငယ်တုန်း
ပြောရရင်မှတ်မှတ်သားသား အသေအချာတောင် အဗျူးမခံထိဖူးဘူး…။
အိုင်ကျူတက်စ် တခုတည်းနဲ့ အလုပ်ထဲရောက်လာတယ် ဆိုပါတော့ ..။
အလုပ်ထဲရောက်ပြီးမှ မောင်းခံထိတာ စုံပလုံကို စိနေတာပဲ ..။
ကွကိုယ် အတော် ညက်နာပြောင်တယ်မှတ်တာ ခုထိ အင်တာဗျူးကို ကြောက်တုန်းပဲရယ်။
အိုင်ကျူတက်(စ) တော့ မဖြေဘူးပေါင်။ ဖြေရဲဘူး။
ဆိုက်ကို တက်(စ) တော့ တစ်ခါ ကျဖူးပြီးကတည်းက ကိုယ့်အခြေအနေ ဘာ ဆိုတာ သိလိုက်ပြီလေ။
နောက်မှ ဆရာဂီ ပေါက်ကရ ၄၀ (အဲလေ) အတွေ့အကြုံလေးတွေ မျှပါဦးလေ။
ဆွိ.. ပေါက်ကရ၄၀ က ၀ါးမူပိုင်နော်… ကလောင်နာမယ်နောက်မှာ ဂွင်းဇဂွင်းပိတ်နဲ့ ထဲ့မှာ.. :harr:
မူပိုင်ခွင့်တွေ မှတ်ပုံတင်ပေးပဟေ့ ဆိုတော့ မိန်းမတယောက်
နေလုံးကြီးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး သူပိုင်ပါသတဲ့ ..လာပြီးလျှောက်တာ။
တခြားဘယ်သူမှ ပိုင်တယ်ပြောထားတာလည်းမရှိတော့ ..
ဒီဘွားတော်ဂေါက်နေလားမသိ ..နားအေးပြီးရော ..ရက်ဂျစ်စတာ လုပ်ပေးလိုက်သတဲ့
ကျေးဇူးရှင် ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ပုံက နေကို သူပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဆိုလာအင်နာဂျီ ထုတ်သူတွေကို တရားစွဲမယ် ..သူ့ကိုပိုက်ဆံပေးရမယ်
ထ လုပ်လို့ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ဖူးကြောင်း ရယ်..။
အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် သိပ်မကြာသေးခင်က စပိန်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်..
အိုဘယ့် မူပိုင်ရှင်မဂျီး မမခိုင်..
Woman Claims Legal Loophole Means She Now Owns The Sun …
Dec 3, 2010 – Gawker Sued For Copyright Infringement For. … Yeah, the money from the sun’s “users” would be nice if it appeared, but imagine all the lawsuits from people with skin cancer … I haveapatent on the use of any celestial body for the production of energy. …. Looks like the Spanish woman is going to sue God.
(ပေါက်ကရ) ကို နောက်က မရေးနဲ့။
(ပေါက်ကရ) ဝါး လို့..
နာ သာ မူပိုင်ရှင်မဂျီးဖြစ်လို့ကတော့ စွဲလိုက်ရမဲ့ တရားတွေ ဆိုတာ။
ကဲ ကဲ ညီမလေးခိုင်ဇာ ရှေ့ကခုံမှာထိုင် ဗျုးမယ်
အခုလောလောဆယ်ဆယ် ညီမလေးမှာ ချစ်သူရှိရင် မမကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါကွယ် အိုက်ဒါဆို စားရိတ်ငြိမ်း တစ်လကို ဒေါ်လာတစ်သိန်းနဲ့ ချက်ချင်းခန့်လိုက်မယ်ကွယ် (နာ့မမကြီးကို ငိုအောင်စလိုက်ပြီ )
အဟင့်။ အော်ငိုလိုက်ရမလား။ ၇ အိမ်ကြား ၈ အိမ်ကြား။
ဟွန့်။ ဘာလို့မရှိရမှာတုန်း။ ရှိပါ့။
ပေး ဒေါ်လာ ၁ သိန်း
(အင်တာဗျူးနဲ့ ပတ်သက်တာ နောက်တစ်ပို့(စ) မှာ ရေးပါ့မယ်။ အစက တူတူရေးမလို့ဟာ။ ခု လေကြောအတော်ရှည်သွားပြီ။)
အင်း လက်သွက်ခြေသွက် စကားကြွယ်တဲ့သူများကျတော့
ဂလောက် ခြေသွက် လက်သွက် နှုတ်သွက်တာကို ကျန်ရစ်ဖစ်တာ ဘယ်နှစ်ခါ ရှိပြီတုန်းမသိ။
အလုပ်အကိုင်မှာ ပြောပါတယ် ကိုခရယ်….
စလုံးမှာပထဦးဆုံး အင်တာဗျူးခံရတာ PARK MALL BLDG. က PENTA OCEAN မှာ
ကျုပ်မှာတော့အချီအချ လစာအကြောင်း ခံစားခွင့်အကြောင်းဆွေးနွေးလို့…
ဒါပေသည့် အတူသွားတဲ့ကျုပ်စီနီရာကြီးက ဘာမေးမေး “ရက်စ်” ပဲဖြေတော့…
“နင့် စီနီယာတောင် သဘောတူတာ နင်ကသူ့လောက်လုပ်သက်မရှိပဲ ဘာလို့လစာပိုလိုချင်တာလဲ” တဲ့…
ကျုပ်စီနီယာကြီးက ဘိုလိုမတတ်၊ လုပ်သက်စာရွက်တွေက အင်ထုလာတာ…
အရင်က အင်တာဗျူးချိန်းထားလို့သွားတာ “အိုင် ဝမ့် အင်တာဗျူး ယူ” တဲ့လေ…
ဟိုက “ငါမအားသေးဘူး” လို့အပြောခံထားရတဲ့သူ….
အင်တာဗျူးတဲ့သူတွေက ကိုယ်ခန့်ချင်တဲ့ နိုင်ငံသားရဲ့ နိုင်ငံက အကြောင်းလည်း သိသင့်သေးသဗျ။
ကျုပ် ဘိုးတော်ဆို ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသားများ ဘွဲ့လက်မှတ် အင် ထုတတ်တယ်လည်း ကြားဖူးတယ်။
နည်းပညာ ကျောင်းတွေမှာ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့လည်းသိတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ရှေးက အခုထိ နီးစပ်ရာနဲ့နှစ်ပါးသွားနေကြတုန်း။
ကိုယ်က သာ ကိုယ်ကြောင့်ရလိုက်တာလို့ထင်နေပေမယ့်
ကိုယ့်မှာအဖေအမေ တွေ အမျိုးအဆွေအရိပ်တွေကိုယ့်အပေါ်မှာမိုးနေတာ တွေရှိနေတုန်းပါဘဲ။
ဟုတ်။ ဒီမှာလည်း အဲဒီလို ရှိပါ့ လေးပေါက်။
တစ်ချို့ကတော့ အဲဒါက လူယုံ ရတယ်လို့ ယူဆတယ်ထင်ပါတယ်။
ဗိုလ်သင်တန်း လူတွေ့ မေးတော့လူကြီးများက
ရဲဘော် …. မင်းရှေ့ မှာထိုင်တဲ့ သူတွေကိုဘယ်လိုထင်သလဲတဲ့ 
အားလုံးကို ဒါဘဲထင်တယ်ဆိုပြီး ခြေထောက်တစ်ဘက်ကို စားပွဲပေါ် ပစ်တင်လိုက်တာ
အဲ့  ကောင် ဗိုလ်သင်တန်းပါသွားသတဲ့  ဗျာ
ဗိုလ် ပီသကြောင်း သိသွားလို့လားဟင်။
အင်းလေ.. ဂျီးဒေါ်တို့က ဆင်ဘော်ရောက်နေဒေါ့.. အင်ဒါဗျူးတွေအကြောင်း
ပြန်ပြောနိုင်ဒါပေါ့.. အူးစည်တို့များ အင်ဒါဗျူးသမျှပြောရဲဘူး..
တခါ အလုပ်အဒွက် ဂျာမနီက ခရူမန်နေဂျာမက အွန်လိုင်းက ဗျူးတာ အာသွက်သွက်နဲ့ မေးသမျှ ဖြေနိုင်တယ်ဆိုပီး
ဒီဘက်က ကမ်ပဏီကလည်း ဘိုလိုမှုတ်တာ ကောင်းဒယ်ကွာစ် မင်းတော့အထုတ်ပြင်ထားလိုက်တော့ ဆိုဒေါ့
ပျော်ဘီးဒေါ့.. ဘော်ဒါတွေကို ဘီဘီတိုက်လိုက်ဒါ… နောက်နေ့ကျဒေါ့
ကမ်ပဏီက မင်းမအောင်ဘူးဒဲ့… ဘာလို့လဲမေးဒေါ့.. မြန်မာထဲမှာ
အဲ့လောက် ချကားများတဲ့ ခရူဆို ဘောဘောမှာ ကွိုင်များ ပြသနာများလို့ မခန့်ဘူးပြောဒယ်ဒဲ့…
ရက်စ်နိုးဖြေတဲ့ ကိုရင့်ရှေ့က လူက ရသွားဒါ…
အဲ့ဒါက အင်ဒါဗျူးဆို ဒီလိုပဲ မှတ်လိုက်ဒယ်..
ဂျီးဒေါ်ဇာကော အူးစည်လို တပတ်နွမ်းလေးကို ဗျူးချင်သေးရားဟင်.. ကွိကွိ…
ဘယ်နဲ့ ကျုပ်ကို ဆင်ပေါ် အတင်း တင်နေတာတုန်းရယ်။
သတ္တဝါ ညှင်းပန်းမှုနဲ့ တရားစွဲခံနေရမယ်။
အင်တာဗျူးဆိုတာ ပြောကောင်းတိုင်း စွတ်စက်ပြောလို့ရတာဟုတ်ဘူးတော့။
အရမ်းသွက်လွန်းရင် တစ်ချို့က ကြိုက်သလို တစ်ချို့က လန့်တယ်ရယ်။
အလုပ်ထဲရောက်မှ နှုတ်နည်းတာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင် ရတဲ့ နေရာ တော့ အင်း/အဲ နဲ့လုပ်နေလို့မရဘူး မှတ်တာပဲ။
ကိုယ့်ကို မရွေးရင်လည်း ကိုယ် လို ဝန်ထမ်းကောင်းလေးနဲ့ သူတို့ လွဲရတယ်ဆိုပြီးမှတ်ပါလေ။
သူတို့ အတွက် စိတ်မကောင်းစရာပါ့။
ကရင်စည် ကို ဗျူးဖို့ကတော့ ကျုပ် ရန်ကုန်/ဒလ ရှပ်ပြေးယာဉ်လေး ဆွဲနိုင်တဲ့ အချိန်မှ ခေါ်ပါ့မယ်။
ဇာလေး မန်းတလေးပြန်လာရင် ဖြေရမယ့်
ဖိုးဖိုးပေ ရဲ့ အင်တာဗျူးကတော့ ဒီလိုပါကွဲ့ 
သားသားမီးမီး လေးတွေအတွက် တင်ကြိုစဉ်းစားထားပါသလား
ဘိုးဘိုးပေ က ဒီ အစီအစဉ်တွေ အားလုံးအတွက် စားရိတ် ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။
အဲဒီ အင်တာဗျူးဖြေဖို့အတွက် ကိုကိုလေး နဲ့ တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်နော်။
အူးလေးပေရေ.. ဇာဂျီးက ဒေါင်းခါနီးမို့… ဒိုင်းမွန်းဖဲဖြစ်တဲ့ တိုတိုလေးကို ပစ်ပြနေပီ…
ကျုပ်တို့က ဂျိုကာကိုင်ထားပေမဲ့.. ဒေါင်းဖို့မသေချာတော့.. အသာလေး ဆုတ်နေ
လိုက်ဒါကောင်းတယ်..။ ပွဲသိမ်းမှ အလုံးကြေး ယူတာပေါ့ဗျာ.. အဟီးး..
ဒီ ကရင်စည်ဟာ အကြံဇိုးကြီးနဲ့။
အချပ်တွေကိုင်ထားတာချင်း တူသော်လည်း ကစားနည်းမတူပါဘူးလေ။
ကျွန်တော်.အလုပ်လျှောက် အင်တာဗျုး ဖြေတိုင်း..တစ်ခါမှ မလွဲဖူးသေးဘူးဗျ ။
ဗျူးတဲ့ လူနဲ့၇ယ်၇ယ်မောမော…လေပေးဖြောင့်အောင်..ပြောနိုင်သွားပြီဆိုရင်..
အတော် ..ဟုတ်သွားပြီ..ထင်တယ် ။
သူ ကိုယ့် အရည်အချင်းကို လက်တွေ့မသိခင်
စကားပြောရာမှာကို သူတို့နဲ့ အပေးအယူမျှသွားဖို့က အရင်အရေးကြီးပါ၏၊
အလက်ဆင်း ဒီလောက်သွက်ပုံမျိုးနဲ့ဆို အင်တာဗျူးသူ သဘောကျမှာလည်းသေချာပါ၏။
အနော်ကတော့ အလုပ် နှစ်ခုပဲ ရှိသေးတယ်.. ပထမ တစ်ခုကလည်း ခန့်မှာ သိသိကြီးနဲ့ ခေါ်တွေ့ပြီး ဗျူးတာ… နောက်တစ်ခုကကျတော့ တွေ့တွေ့ချင်း program ဆွဲခိုင်း.. service တွေ ထည့်ခိုင်း.. cost sheet မတွက်တတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ ဘယ်လောက် catch လုပ်နိုင်လဲ ကြည့်မယ်ဆိုပြီး တစ်ခါတည်း သင်ပေးပြီး တွက်ခိုင်းနဲ့… နဲ့.. နဲ့… အလုပ်ပြောင်းဖြစ်သွားတာပါပဲရှင့်… ဟိုလိုမျိုး အင်တာဗျူးကြီးတွေတော့ ဖြေ၀ူးသေးဝူး…
အင်တာဗျူးကလည်း ၂ မျိုး ၃ မျိုးလောက်ထပ်ခွဲနိုင်တာကလား မွန်မွန်ရယ်။
ဒီထဲမှာ မရေးနိုင်လို့ ချန်ခဲ့ရတာရှိပါသေးတယ်။ နောက်မှ ထပ်ရေးပါ့မယ်။
ကိုင်စရာရေ အဲ့ဝုက်ဘူး မှားတွားလို့ ခိုင်ဇာရေ……
လေ့လာသွားပါ၏ဗျာ…. ကျုပ်ကတော့ အင်တာဗျူးတွေဘာတွေ
အလုပ်လျှောက်တာတွေ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသေးလို့ ဘာမှမတိဘူးရယ်……
အဲလိုကြီး ခေါ်ပြန်ပြီ ဒီ ကိုရင်မိုဘိုင်း ကတော့။
အစ်မရေ ရန်ကုန်မှာတုန်းကတော့ စီဗွီတွေလိုက်တင်ရတာ ထီးဖြူ ဖိနပ်ပါးပါပဲ အင်တာဗျူးမရခဲ့ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ စီဗွီကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေကနည်းနေတာကိုး အော်တိုကတ်ကိုလည်း ဘေ့စစ် ပဲတတ်ထားတာလေ ရွှေကြည့် အစ်ကိုကလည်း ထပ်မတက်ရဘူးတဲ့ အလုပ်ကရတဲ့ သင်တန်းကပိုကောင်းဆိုပဲ ဒီလိုပဲအလုပ်ကသင်မှာတဲ့ ဒါပေမယ့် သူများတွေက တထပ်ကြနဲ့လာတင်ကြတာကိုး။ အဲလိုနဲ့သင်တန်းကဆရာမကသူ့လက်ထောက်လာလုပ်ပါဆိုလို့ လုပ်နေလိုက်တာ ၆ လလောက်ကြာတော့ ဆရာမနဲ့ ကျောင်းအုပ် ရန်ဖြစ်ပြီးဆရာမက ထွက်မယ်လုပ်တော့ ကိုယ်က အလိုလိုပြုတ်ပါရော အဲတော့မှ သင်တန်းသားထဲက အစ်ကိုကြီးက သူ့အသိအလုပ်မှာပြောပေးမယ်ဆိုတော့ စီဗွီတောင်မပါဘူးဗျူးပြီး ပုံဆွဲခိုင်းပြီးအလုပ်ရပြီးမှာ စီဗွီတင်ရတဲ့အဖြစ်။ လစာတော့နည်းတယ်။ အဲဒိမှာ မခိုင်ဇာပြောသလိုပဲ <<<>>>> အဲလိုလေးနဲ့ လေးနှစ်ကြာပြီး နိုင်ငံခြားအင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံရအောင်ဆိုပြီး အေးဂျင့်ပြောတဲ့အလုပ်ကို ဗျူးကြည့်လိုက်တာ အွန်လိုင်းကဗျူးတာပါ၊ ကြောက်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ့ ခြေတွေလက်တွေလည်းအေး ရင်တွေလည်းတုန် အဲ့လို အဲ့လို ဖြစ်တာ။ ဒါပေမယ့် ပုံလည်းမဆွဲခိုင်းပဲ စကားပြောလည်းသေချာမရပဲ တခါဆို တခါဆိုသလောက် အလုပ်ရပြီး ခြင်္သေ့ကျွန်းကိုရောက်လာတော့တာပဲ။ အလုပ်ရပြီဆိုတော့ရူးတောင်ရူးချင်ပါတယ် အစ်မရယ် ဒီနေ့တော့ ဂလောက်ပါပဲ ဟီးး (ပြောတာလည်းများပေါ့)
သူကြီးက ရှည်လျားသောကွန်မန့် လို့ ရေးထားတော့ကာ……
အဲဒီ ရှည်လျားသော ကော်မန့် ဆိုတာကြီး မြင်မြင်ပြီး ရှည်ရှည်မရေးမိရင်ကို အပြစ်မကင်းသလိုပဲရယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာတဲ့ အေးဂျင့်နဲ့ အလုပ်ရတာဆိုတော့ အင်တာဗျူးရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ မခံစားရဘူးပေါ့ကွယ်။
အင်တာဗျူးဆိုရင်..ကျုပ်ကတော့ အသေမှတ်ထားတာတခုက .
အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ သိပ်ပိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ရင်ဖြစ်..သို့မဟုတ်တောင်.ထွေရာလေးပါးလေကြောမိခဲ့ရင်.
လုပ်ဆိုပီး ကိုယ့်ဘာသာဖော်မြူလာထုတ်ထားတာပဲ.. ရယ်
ဒါနဲ့ ကျော့်ကို ဒေါ်ဆွိ တပည့်ဖြစ်လက်ခံဖို့
အပိုင်း.၂ ကျမှ ဆက်ပြောတော့မယ်..နော့
၂ ကိုယ်ကြား မဗျူးရဲအောင်ဖြစ်ရပါပကော ချစ်တပည့်ကြီးရယ်။
တစ်ခါတည်း မှတ်မိအောင် ဘာတွေ အဟွာပြုမှာပါလိမ့်။ (ဘယ်စကားတွေပြောမှာလိမ့်လို့ပါ)
ဟွန့်။ ဂလိုတွေ အညှီတွေလာပြောရင် လက်မခံပဲနေလိုက်မယ်။
(ဟိ။ ဆရာမ ညှီသလောက် မမှီနိုင်လို့)
ဦးမာဃတော့ တစ်ခါမှ အဗျူး မခံရဖူးဘူးဗျ
သိကြားမင်းရာထူးကိုတောင် အော်တိုမက်တစ် ခန့်ထားခံရတာ ဆိုတော့
အင်တာဗျူးကို သိပ် ဂရုမစိုက်မိဘူး
ဦးမာဃကသာ အော်တိုမက်တစ် သိကြားမင်းဖြစ်တာရယ်
ကျန်တဲ့ တာဝတိံသာ ရာထူးတွေအားလုံးကို ဦးမာဃ ကိုယ်တိုင်ဗျူးပြီးမှ ခန့်တာဗျ
အော်တိုမက်တစ် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးဘူး
နတ်သမီး လျှောက်လွှာတွေ ခေါ်ထားတယ်လေ
နတ်သမီး တစ်ဖက်တစ်ထောင် စီမံကိန်းအတွက်
အဲဒါလေး စိတ်ဝင်စားရင်လဲ အခု လျှောက်ထားလို့ ရပါသေးတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း
နတ်သမီး တစ်ထောင်ထဲပါဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူး။ အငွေ့မစားနိုင်ဘူးရယ်။
ကျုပ်ဟာကျုပ်ကို တစ်ဖက် တစ်ရာ လောက်နဲ့ မအားဘူး။
စာရွက်စာတမ်းတွေ ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ ပြောပါတယ်။
ဒါဆို နောက် ပို့(စ) မှာ မမ နဲ့ ဆက်ပြောလို့ရပြီ။
တူမကြီးခိုင်ဇာခင်ဗျား….၀င်ရောက်ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါကြောင်း…ဒီပိုစ့်လေးဟာဖြင့်..ကောင်းမွန်ပါကြောင်း..တူမကြီး၏ လက်တွေ့ ဘ၀/လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများအား..စေတနာသန့်သန့်ဖြင့်..ရေးသားပေးချင်းအားဖြင့် မြန်မာ အမျိုးသမီး/သားလေးများ အတွက် တဖက်တလမ်းမှ စိတ်ဓာတ်/အတွေ့အကြုံ တိုးတက်စေရန်…အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်၍ ၀မ်းသာမိပါကြောင်း။
နောက် ဆက်ရန်ရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ အဲဒါအတွက် ကိုယ်ဘာတွေ ကြုံဖူးပါတယ် ပြောရင်း ရှည်သွားလို့ပါ။
တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ အင်တာဗျူးခံရဖူးတယ်။
၁၅ မိနစ်လောက် စုံပလုံစိအောင်မေးပြီးမှ သမီးအသက်ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီး ကျတယ်လေ။
စိတ်နာလို့ နောက်ဘယ်တော့မှ မဖြေတော့ဘူး။
အာတီဒုံ ၊ အနော်တို့ က အဲလိုအော်နုိုင်သေးဘူး။
“သူ့ ဆန်စား ရဲမှ” လို့ တွေးနေရတုန်း။။။
ဆား လုံးဝမပါ …..
အချိုမှုန့် ကဲနေတယ် …..
အင်တာဗျူး ဆိုလို့ …
တား သိဒဲ့ မိကောက်ရဲ့ အင်တာဗျူး ကဂျာကို ရေးကျိလိုက်ဒါ .. ဟီးးး